बलिउडको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो फिल्म बन्यो 2.0 - Glamour Nepal
मल्टिस्टार फिल्म ‘लाखे’का लागि नयाँ कलाकारको खोजी
दयाहाङ र प्रकृतिको ‘बिहे पास’कोलागी कलाकारको खोजी, फागुन ११ र १२ मा हुदैछ अडिसन
ऋषीराज आचार्यको ‘चुरीफुरी’ मा को को छन् हिरो-हिरोइन ?
बाहिरियो तस्विरहरु! एस्तो छ, आर्यन र उपासनाको ‘डिसेम्बर फल्स’ लुक्स
कृष्ण लिलाको रोमान्टिक गीत ‘कुनै दिन यस्तो पनि.…’
बर्षा राउत : एउटै सहारा तिम्रै मायाको ❤️
मनिषालाई नेपाली सुन्दरीहरुको साथ । भारतीय मिडियामा रोईलो
अभय ढुङ्गेल र रेश्मा सुनुवारको “मार्यो मार्यो…”
हिराकाजी थापा निर्देशित अन्जु पन्तको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘काँडा’
निशाको ‘ओ प्रिया’ मा आकाश र पुजाको विवाह
७०औं ‘मिस युनिभर्स’का लागी इजरायलमा सुजिता बस्नेत
प्रतिक्षा शुक्ला भईन मिस नेपाल युएस २०२१
‘अस्तित्व’ शीर्षकमा नारी व्यक्तित्वका विविध आयाम प्रस्तुत हुँदै
‘मिस इको इन्टरनेशनल २०२१’ मा अनुश्मा रायमाझी
एकै मञ्चमा अबिबाहित र बिबाहित महिलाहरुका दुई सौन्दर्य प्रतियोगिता
कोरोना’ भनेर चिच्याउँदा ५५ को दिनको जेल सजाँय
बलिउडको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो फिल्म बन्यो 2.0
बलिउड फिल्म उद्योगको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो मानिएको फिल्म 2.0 मंसिर १४ (नोभेम्बर २९) मा विश्वव्यापी रिलिज हुँदैछ। रजनीकान्त र अक्षयकुमार स्टारर यो फिल्म पाँच सय ४३ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो। फिल्म रजनीकान्त अभिनीत बलिउड फिल्म रोबोटको सिक्वेल हो।
अक्षयकुमार 2.0 मा नकारात्मक भूमिकामा छन्। यो भूमिकाका लागि उनले ५२ करोड पारि श्रमिक लिएका थिए। चलचित्रका निर्माता ए सुभासकरन, राजु महालिंगम हुन्। चलचित्रका निर्देशक एस शंकर हुन् भने संगीत एआर रहमानको छ। फिल्ममा रजनीकान्त, अक्षयकुमारका साथमा, एमी ज्याकसन, सुधांशु पाण्डे, आदिल हुसेनलगायतका कलाकार छन्।
2.0 को ट्रेलर हेर्नुहोस्
2.0 कोे पहिलो भाग ‘रोबोट’ को अन्तिममा ‘चिठी’लाई संग्रहालयमा राखिन्छ। केही वर्षपछि एक रहस्यमयी र शक्तिशाली सुपरभिलेन (अक्षय कुमार) ले सर्वसाधारणमाथि आतंक मच्चाउँछ। ऊ आफ्नो नोक्सानको बदला पूरा दुनियाँसँग लिन थाल्छ।
यो सुपर भिलेनको गतिविधि मोबाइलको माध्यमबाट चल्छ। यसैको माध्यमबाट उसले संसार हल्लाउन खोज्छ। यस्तो अवस्थामा त्यही संग्रहालयमा राखिएको ‘चिठी’ को याद आउँछ जसले यो आतंक मच्चाउने सुपर भिलेनसँग भिड्न सकोस्। तर यो लडाइँ सहज छैन। फिल्ममा अहिले मानिस कसरी मोबाइलको गुलाम बन्दैछ भन्ने पनि देखाइएको छ।
2.0 को रोमान्टिक गीत ‘तु हि रे’ हेर्नुहोस्
यो फिल्म मूल रूपमा तमिलमा बनाइएको हो। १४ भाषामा डबिङ गरेर फिल्म रिलिज गरिँदैछ। यो भारतीय फिल्म इतिहासको सबैभन्दा महँगो फिल्म हो। साइन्स फिक्सन ‘२.०’ लाई यसका फ्यान कुरिरहेका छन्। फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि यसको प्रतीक्षा बढेको हो। फिल्ममा अक्षयकुमार फरक रूपमा देखिनेछन्। फिल्ममा भीएफएक्सको प्रयोग धेरै गरिएको छ।
रिलिजभन्दा पहिले नै 2.0 ले प्रभासको ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड तोडेको छ। प्रभासको ‘बाहुबली २ द कन्क्लुजन’ २०१७ को सबैभन्दा हिट फिल्म हो। यो फिल्ममा पनि भीएफएक्सको अत्यधिक प्रयोग गरिएको थियो। फिल्मले बक्स अफिसमा कयौं रेकर्ड तोडेको थियो।
2.0 लाई अनलाईन लिक गरिदिने धम्कि
‘बाहुबली २’ भारतमा लगभग ६ हजार पाँच सय स्क्रिनमा रिलिज गरिएको थियो। यो सबैभन्दा ज्यादा स्क्रिनमा रिलिज हुने पहिलो फिल्म बनेको थियो। रिपोर्टअनुसार रजनीकान्तको 2.0 बाहुबलीको रेकर्ड तोड्दै ६ हजार ६ सयदेखि ६ हजार आठ सय स्क्रिनमा रिलिज हुँदैछ।
सुशान्त सिंहको अन्तिम फिल्म जुलाईमा रिलिज हुने
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको अन्तिम फिल्म ‘दिल बेचारा’ जुलाई मा रिलिज हुने भएको छ।केही समययता...
‘गुलाबो सिताबो’ मा अमिताभको एस्तो लूक्स !
बलिउड नायक अभिताभ बच्चन अहिले नयाँ फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’को छायांकनमा व्यस्त छन्। फिल्मको निर्माण कार्य...
‘जिरो’को ‘इशकवाजी’: कम्मर मर्काउदै साहरुख र सलमानको जोडी
रेड चिल्ली इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘जिरो’को अर्को धमाकेदार गीत रिलिज भएको छ।...
रणवीर संग बिवाह गरे लगत्तै भन्सालीको प्रोजेक्टबाट किन हटाईयो दीपिकाको नाम?
शाहरुख खान र सलमान खानका साथ फिल्म बनाउने योजना बनाइरहेका छन् – निर्देशक सञ्जय लीला भन्साली। खबरहरुका...
‘ड्रिमगर्ल’ फर्स्ट लुकमा आयुष्मानको महिला रुप
अभिनेता आयुष्मान खुरानाको नाम आउँनेबित्तिकै दर्शकको दिमागमा विभिन्न पात्र आउँछन्। भिक्कि डोनरमा...
पाईरेसीको मारमा रजनीकान्तको 2.0, अनलाईनमा फुल एचडी प्रिन्ट
रजनीकान्तको '2.0' फिल्म फुल एचडी प्रिन्टमा तामिल रकर्सले आफ्नो पाइरेसी वेभसाइटमा राखेको छ। एसअघि पनि तामिल रकर्सले ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’, ‘सुई धागा’, ‘अन्धाधुन’ र ‘नोटा’ जस्ता फिल्म लिक गरेको थियो।
एस्तो रहेछ लिङ्ग परिवर्तन गर्ने तरिका [भिडियो]
फिगर स्केटिङ: बरफ माथी खिलिने ग्ल्यामरस खेल...
शाकाहारीका लागी अव बजारमा भेजीटेरियन कण्डम
जाडो मौसममा आफ्नो सुन्दरता कायमै राख्नकालागि घरेलु...
सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा कडाई, यस्ता छन् ७ कानुनी...